Knowledgebase | Saturngod
2 Replies အပိုင်း ၁ ၊ အပိုင်း ၂ ၊ အပိုင်း ၃
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Android, iOS on May 16, 2013 by saturngod. Mobile Apps Development : Part 3
2 Replies အပိုင်း ၁ | အပိုင်း ၂
Mobile Apps Devleopment ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ iOS နဲ့ Android ကိုပဲ အဓိကထားပြီး ဆက်ရေးသွားမှာပါ။ တခြား platform တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခါမှ သေသေချာချာ မလေ့လာဘူးတာကြောင့် မရေးတော့ပါဘူး။
iOS Development ကို စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Xcode နဲ့ Mac မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ Xcode ကိုတော့ Mac Apple Store ကနေ download ချယူနိုင်ပါတယ်။ Xcode ကို Download ချပြီးသွားပြီဆိုရင် Xcode ဖွင့်ပြီးတော့ Xcode Menu > Preference .. > Download ကို သွားပြီးတော့ iOS 5.0 , iOS 5.1 နဲ့ Command Line Tools simulator တွေကို download ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
iOS အတွက် Development လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး ရှိနေဖို့ မလိုပါဘူး။ mac OS X မှာ xcode သွင်းပြီးတာ နဲ့ စပြီး ရေးလို့ရပြီ။ Device ရှိရင်တော့ iOS Developer Account ကို ၁ နှစ်စာ ပေးပြီး ဝယ်စမ်းမှ ရပါမယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Android, iOS on May 5, 2013 by saturngod. Mobile Apps Development : Part 2
Leaveareply အပိုင်း ၁ ။ Mobile Apps Development
Mobile Development ပိုင်းကို လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားရင် အရင်ဆုံး လိုအပ်တာက Device ပါ။ တစ်ခါမှ မသုံးဖူး မမြင်ဖူးတဲ့ Phone OS အတွက် UI ပိုင်းကို စဉ်းစားဖို့ဆိုတာ အတော်ကို မလွယ်လှပါဘူး။ iPhone က design pattern နဲ့ Android က design pattern နဲ့ ဆင်သလိုလို ရှိပေမယ့် မတူပါဘူး။ Windows Phone 8 ဆိုရင်လည်း တစ်ခြားဆီပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်မယ့် Mobile Platform အတွက် OS ကို ကိုယ်တိုင် အရင် သုံးကြည့်ဖို့လိုတယ်။ iOS လုပ်မလား Android လုပ်မလား ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ဘယ် OS ကို သဘောကျလဲ ပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်။ Phone သုံးကြည့်ရင်းနဲ့ အခြားသူတွေ ရေးထားတဲ့ Application တွေကိုလေ့လာလို့ ရမယ်။ UI concept တွေကို နားလည်လာမယ်။ Web Development ပိုင်းကလာတဲံ့ လူတစ်ယောက်က iPhone မသုံးဘူးပဲနဲ့ iPhone အတွက် UI ကို Web မှာလို စဉ်းစားလို့ မရသလို Android မသုံးဘူးပဲနဲ့လည်း Web UI အတိုင်း Android မှာ သွားပြီး apply လုပ်လို့မရပါဘူး။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Android, iOS, mobile on May 2, 2013 by saturngod. Mobile Apps Development
Leaveareply လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကယောင်ခြောက်ဆယ် ဆိုပြီး ကျွန်တော် Post တစ်ခု ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲတုန်းကတော့ Mobile Development ကို စတင်လေ့လာနေတုန်း ဘာလုပ်ရမလဲ မသိတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အခု အချိန်မှာတော့ Mobile development နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိနေပြီလို့ ဆိုရမယ်။ ကျွန်တော့်ကို Mobile Developer ဖြစ်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မေးနေတဲ့ သူတွေအတွက် အခု post လေးကို ရေးလိုက်ရတာပါ။ အရင်တုန်းကလည်း ကျွန်တော် mobile devleopment နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးခဲ့ဖူးတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် Mobile App Development ဆိုတဲ့ video လေး တစ်ခုလည်း ဖန်တီးခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Mobile app vs Web app ဆိုတဲ့ presentation လေးကို Myanmar Link မှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုဇော်ဇော်မျိုး လွင် ရဲ့ Mobile Apps ပွဲအတွက် Myanmar App Market Analytic ဆိုတဲ့ video လေး တစ်ခုလည်း ဖန်တီးခဲ့ဖူးပါတယ်။ iOS developer စလုပ်ခဲ့တုန်းက ခံစားရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို iOS App Developer Life နဲ့ iOS Developer Life :: Part II ဆိုတပြီး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ iPhone Market ဆိုပြီး Part 1 ,2,3ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေ ပြန်ဖတ်ရင်တော့ အနည်းနဲ့ အများ အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ အခု Android Marketplace ထွက်ပြီ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Android App development က ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလာပါပြီ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Android, dev, iOS, mobile on April 29, 2013 by saturngod. Deploy website using git
Leaveareply HTML5 စာအုပ် စ ရေးတုန်းက github pages ကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ github page သုံးတဲ့ အတွက် တစ်ခုခု ပြင်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း push လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ FTP ကို ချိတ် ။ upload တင် စတာတွေကို လုပ်နေစရာမလိုတဲ့ အတွက် တော်တော်လေးကို သက်သာပါတယ်။
သို့ပေမယ် ကျွန်တော် HTML5 စာအုပ်ကို opensource လုပ်ချင်တာ မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် github ကနေ ပြန်ပြီးတော့ ဖျက်ချခဲ့ပါတယ်။ github လိုမျိုး feature ရအောင် appfog ကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ mmwebfonts သုံးခဲ့တုန်းက appfog က custom domain အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့ ၁ လကို US $ 20 ပေးမှသာ custom domain အသုံးပြုခွင့်ရလိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ appfog မှာ တင်ဖို့ ကိစ္စကို လက်လျော့လိုက်တယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged git, Linux, Ubuntu on April 7, 2013 by saturngod. helios
Leaveareply Heroku က Lead developer , Mattt Thompson က helios ဆိုတာကို ထပ်ပြီး မိတ်ဆက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ Mattt Thompson က open source app နဲ့ library တော်တော်များများက ဖန်တီးရေးသားထားပါတယ်။ ဥပမာ။ AFNetworking , PostgresApp တို့ စတာပေါ့။
helios ကတော့ extensible open-source mobile backend framework လို့ ဆိုပါတယ်။ မျက်စိထဲမြင်အောင် ပြောရရင် Parse opensource လို့ ဆိုရမှာပဲ။ သူ့မှာ ပါတဲ့ feature တွေကတော့
Data တွေကို online ကနေ read လို့ရမယ် write လို့ရမယ်။ နောက်ပြီး Core Data model ကို auto generate လုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Parse မှာလိုပဲ Push Notification service ပါလာတယ်။ manual push စတာတွေကို လုပ်လို့ရလာတယ်။
Server side ဘက်ကနေ in app purchases တွေကို verified လုပ်လို့ရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒါလေးကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
passbook ရဲ့ pass registration, updating, နဲ့ notifications စတာတွေ ပါဝင်တဲ့ web service feature လည်းပါတယ်ဆိုထားပါတယ်။
ဖတ်ကြည့်လိုက်တာကတော့ တော်တော်လေးကို မိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ မနေ့ညက စမ်းကြည့်တယ်။ Server run လိုက်တာထိ ရတယ်။ သို့ပေမယ့် ရှေ့ဘယ်လို ဆက်ရမှန်း မသိတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအပတ် အားတဲ့ အခါမှ ထပ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါအုံးမယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase on April 5, 2013 by saturngod. Link
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 February 26, 2013
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer. — Albert Einstein Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod